१ करोड ३६ लाखको एक केरा ! यी व्यक्तिले खाइदिए (भिडियोसहित) — Paschimnews.com News From Nepal
१ करोड ३६ लाखको एक केरा ! यी व्यक्तिले खाइदिए (भिडियोसहित)
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/८/२५ गते
एक व्यक्तिले १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पर्ने एक केरा खाएका छन् ।
यो केरा अमेरिकाको एक आर्ट शोमा प्रदर्शनमा राखिएको थियो । टेपको माध्यमबाट केरा भित्तामा टाँसिएको थियो । भित्तामा राखिएको केरा एक व्यक्तिले खाएपछि सबैले भिडियो खिचे ।
केरा इटलीका आर्टिस्ट मौरिजिओ केटलनले बहुमूल्य धातुबाट आर्ट गरेर बनाएका थिए । उनले फ्रेन्च एक व्यक्तिलाई उक्त केरा १ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए । फ्रेन्च नागरिकले त्यो केरालाई प्रदर्शनमा राखेका थिए ।
आफूलाई अमेरिकन आर्टिस्ट भन्ने डेविड डटुनाले केरा खाएर भिडियो आफ्नो इंस्टाग्राममा सेयर गरे । तर १५ मिनेटपछि अर्को एक केरा भित्तामा टाँसियो । पहिले केरा खाएको कुरा १५ मिनेटसम्म भाइरल भैसकेको थियो ।
डेविडले केरा खाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि १ करोड ३६ लाख पर्ने केरा एक व्यक्तिले खाएको भन्दै समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदर्शनीका अधिकारीले पनि डेविडलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए ।
मौरिजिओ केटलनले यो केरा मात्र नभएर १८ क्यारेट सुनको ट्वाइलेट बनाएका थिए । उनले बनाएको ट्वाइलेटमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई अफर गरिएको थियो । बेलायतबाट चोरी भएको उक्त ट्वाइलेटको मूल्य झण्डै ५० करोड रुपैयाँ थियो ।